မြန်မာ့ ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တွင် ကြီးမားသည့်ဓာတ်ငွေ့ ရတနာ သိုက် ကြီးတစ်ခု ထပ်မံတွေ့ရှိကြောင်းတောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီကြေငြာ – Shwe Ba
အဆိုပါ ဓာတ်ငွေ့သိုက်အသစ်ကို မြန်မာ့ကမ်းလွန်လုပ်ကွက် A-3 တွင် ထပ်မံတွေ့ ရှိခြင်းဖြစ်ပြီး လုပ်ကွက်၏ သဲကြော အသားတင်အထူသည် ၁၂ မီတာရှိကာ လာမည့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် အကဲဖြတ်တွင်း နှစ်တွင်း ထပ်မံတူးဖော်ရန် လျာထားကြောင်း သိရ သည်။ Posco အနေဖြင့် လက်ရှိတွင် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ လုပ်ကွက်နှစ်ခုဖြစ်သည့် ရွှေ (A-1) နှင့် မြ (A-3) လုပ်ငန်း လည်ပတ်လျက်ရှိပြီး ယင်းလုပ်ကွက်များမှ ထွက်ရှိသော သဘာဝဓာတ်ငွေ့များကို တရုတ်နိုင်ငံနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတို့ကို တင်ပို့ရောင်းချလျက်ရှိကာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း လုပ်ငန်းစုအမြတ်ငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၄၉ ဒသမ ၈၄ သန်းရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ လုပ်ကွက် A-3 တွင် Posco၊ MOGE ၊ ONGC ၊GAIL ? KOGAS တို့ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
တစ်ရ က်လျှင် ဓာတ်ငွေ့ ကုဗပေ ၃၈ သန်းထွက်ရှိနိုင်မည့် ရေနံဓာတ်ငွေ့သိုက်အ သစ် ]မဟာ} ကို မြန်မာနိုင်ငံ၌ တွေ့ရှိကြောင်း တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံးကုမ္ပ ဏီများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သော Posco International က ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၇ ရက် တရားဝင် ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။
မဟာဓာတ်ငွေ့ သိုက်အသစ်သည် ရွှေသဘာဝဓာတ်ငွေ့စီမံကိန်းမှ ကီလိုမီတာ ၃၀ အကွာတွင် တည်ရှိ ပြီး သဘာဝဓာတ်ငွေ့ စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်ရာတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကုန်ကျစရိတ် လျှော့ ချနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မွနျမာ့ ကမျးလှနျပငျလယျပွငျတှငျ ကွီးမားသညျ့ဓာတျငှေ့ ရတနာ သိုကျ ကွီးတဈခု ထပျမံတှရှေိ့ကွောငျးတောငျကိုရီးယားကုမ်ပဏီကွငွော
အဆိုပါ ဓာတျငှသေို့ကျအသဈကို မွနျမာ့ကမျးလှနျလုပျကှကျ A-3 တှငျ ထပျမံတှေ့ ရှိခွငျးဖွဈပွီး လုပျကှကျ၏ သဲကွော အသားတငျအထူသညျ ၁၂ မီတာရှိကာ လာမညျ့ ၂၀၂၁ ခုနှဈတှငျ အကဲဖွတျတှငျး နှဈတှငျး ထပျမံတူးဖျောရနျ လြာထားကွောငျး သိရ သညျ။ Posco အနဖွေငျ့ လကျရှိတှငျ သဘာဝဓာတျငှေ့ လုပျကှကျနှဈခုဖွဈသညျ့ ရှေ (A-1) နှငျ့ မွ (A-3) လုပျငနျး လညျပတျလကျြရှိပွီး ယငျးလုပျကှကျမြားမှ ထှကျရှိသော သဘာဝဓာတျငှမြေ့ားကို တရုတျနိုငျငံနှငျ့ မွနျမာနိုငျငံတို့ကို တငျပို့ရောငျးခလြကျြရှိကာ ၂၀၁၉ ခုနှဈအတှငျး လုပျငနျးစုအမွတျငှေ အမရေိကနျဒျေါလာ ၅၄၉ ဒသမ ၈၄ သနျးရရှိခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။ လုပျကှကျ A-3 တှငျ Posco၊ MOGE ၊ ONGC ၊GAIL ? KOGAS တို့ ပူးပေါငျးလုပျဆောငျလကျြရှိကွောငျး သိရသညျ။
တဈရ ကျလြှငျ ဓာတျငှေ့ ကုဗပေ ၃၈ သနျးထှကျရှိနိုငျမညျ့ ရနေံဓာတျငှသေို့ကျအ သဈ ]မဟာ} ကို မွနျမာနိုငျငံ၌ တှရှေိ့ကွောငျး တောငျကိုရီးယားနိုငျငံ၏ အကွီးဆုံးကုမ်ပ ဏီမြားထဲမှ တဈခုဖွဈသော Posco International က ဖဖေျောဝါရီလ ၁၇ ရကျ တရားဝငျ ထုတျပွနျကွညောလိုကျသညျ။
မဟာဓာတျငှေ့ သိုကျအသဈသညျ ရှသေဘာဝဓာတျငှစေီ့မံကိနျးမှ ကီလိုမီတာ ၃၀ အကှာတှငျ တညျရှိ ပွီး သဘာဝဓာတျငှေ့ စမျးသပျထုတျလုပျရာတှငျ ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှု ကုနျကစြရိတျ လြှော့ ခနြိုငျမညျဖွဈကွောငျး သိရသညျ။